Self- စည်းမျဉ်းပျက်ကွက်၏သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ (2011) - သင့်ရဲ့ Brain On Brain
Self-စည်းမျဉ်းပျက်ကွက် (2011) ၏သိမှုမှ neuroscience
ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2011 Mar;15(3):132-9. doi: 10.1016/j.tics.2010.12.005.
စိတ်ဓာတ်နှင့်ဦးနှောက်သိပ္ပံ, 6207 Moore ကခန်းမ, Dartmouth College က, Hanover, နယူးဟမ်းရှား 03755, အမေရိကန်နိုင်ငံစီးဌာန။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
self-စည်းမျဉ်းပျက်ကွက်အများအပြားလူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုတစ်ဦး core ကို feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ self-စည်းမျဉ်း Self-စည်းမျဉ်းပြိုကျသို့လွှမ်းမိုးသောသွေးဆောင်, အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုနှင့်သယံဇာတတွေပျက်စီးမှုနှင့် Self-ထိန်းချုပ်မှု snowball အတွက်တဲ့အခါမှာအသေးအဖှဲချုံးလုပ်ဆောင်ရမှာတွေမှအောင်မြင်မှုများအားဖြင့်ထိခိုက်ပျက်ပြားစေနိုင်ပါသည်။ သိမှုမှ neuroscience သုတေသနအောင်မြင်သော Self-စည်းမျဉ်းဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက် subcortical ဒေသများကျော် prefrontal cortex ကနေထိပ်ဆုံး-Down ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်မှီခိုကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်ခိုင်ခံ့ Impulses သတင်းပို့မှုကြောင့်သို့မဟုတ်သည့်အခါ prefrontal function ကိုဖြစ်စေ, ချိန်ခွင်လျှာ subcortical ဒေသများ၏မျက်နှာသာအတွက်တင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်အခါတိုင်း Self-စည်းမျဉ်းပျက်ကွက်ဖြစ်ပေါ်မထွက်ရ Self-စည်းမျဉ်းတစ်ခုချိန်ခွင်လျှာမော်ဒယ်ကိုထောကျပံ့ပေးသောများ၏တွေ့ရှိချက်များ, Self-စည်းမျဉ်းပျက်ကွက်အပေါ်မကြာသေးခင် neuroimaging သုတေသနမီးမောင်းထိုးပြ သူ့ဟာသူချို့ယွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောမော်ဒယ်သိမြင်စွဲလမ်းအပြုအမူများမှ neuroscience, စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက်မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။
မူပိုင်ခွင့်© 2010 Elsevier, Ltd. All rights reserved ။
1. et al Baumeister RF ။ ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံး: ဘယ်လိုအဘယ်ကြောင့်လူပေါင်း Self-စည်းမျဉ်းမှာကျရှုံး။ ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 1994 ။
2. et al Hofmann W က။ Impulse နှင့် dual-စနစ်များအမြင်ကနေကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်ရေး။ Psychol သိပ္ပံရှုထောင့်။ 2009;4: 162-176 ။
3. Wagner DD, Heatherton TF ။ အပြစ်သွေးဆောင်ရာအတွက်ပေးခြင်း: အဆိုပါထွန်းသစ်စသိမြင်မှု
Self-စည်းမျဉ်းပျက်ကွက်၏ neuroscience ။ ခုနှစ်တွင်: Vohs KD, Baumeister RF,
အယ်ဒီတာများ။ Self-စည်းမျဉ်းများလက်စွဲစာအုပ်: သုတေသနသီအိုရီများနှင့် applications များ။2။ Guilford စာနယ်ဇင်း; 2010 ။
4. Heatherton TF ။ ကိုယ်ပိုင်နှင့်အထောက်အထား: ကိုယ်ပိုင်နှင့်ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းဥပဒေများ၏အာရုံကြောသိပ္ပံ။ Annu ဗြာ Psychol ။ 2011;62: 363-390 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
5. Baumeister RF, Heatherton TF ။ self-Regulation ပျက်ကွက်: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ Psychol Inq ။ 1996;7: 1-15 ။
6. Schroeder လုပ် SA ။ ကျနော်တို့အမေရိကန်လူသည် သာ. ကောင်း၏-တိုးတက်စေူခင်းကျန်းမာရေးသလားနိုင်သလား။ နယူး Eng J ကို Med ။ 2007;357: 1221-1228 ။ [PubMed]
7. et al Tangney JP ။ အမြင့် Self-ထိန်းချုပ်မှုကောင်းသောညှိနှိုင်းမှုနည်းရောဂါဗေဒ, ပိုကောင်းတဲ့အဆင့်နှင့်လူ့အောင်မြင်မှုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ J ကို Pers ။ 2004;72: 271-324 ။ [PubMed]
8. Duckworth AL, Seligman ME ။ self-စည်းကမ်းမြီးကောင်ပေါက်များ၏ပညာရေးဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ခန့်မှန်းအတွက်အိုင်ကျူ outdoes ။ Psychol သိပ္ပံ။ 2005;16: 939-944 ။ [PubMed]
9. Quinn PD, အန္တရာယ်များအရက်သောက်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆန့်ကျင်နေတဲ့အကာအကွယ်အချက်အဖြစ် Fromme K. ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်း။ Psychol စွဲပြုမူနေ။ 2010;24: 376-385 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
10 ။ et al Hagger က MS ။ အတ္တတွေပျက်စီးမှုနှင့် Self-ထိန်းချုပ်မှု၏ခွန်အားမော်ဒယ်: တစ် Meta-analysis သည်။ Psychol Bull ။ 2010;136: 495-525 ။ [PubMed]
11 ။ Marlatt GA, ဂေါ်ဒွန် JR ။ Relapse ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး: စွဲလမ်းအပြုအမူတွေများ၏ကုသမှုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမဟာဗျူဟာများ။ Guilford စာနယ်ဇင်း; 1985 ။
12 ။ ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ Sinha R. မော်ဒယ်လင်းစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတဏှာ: စွဲကုသမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဂယက်ရိုက်။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2009;14: 84-98 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
13 ။ အန်ဒါဆင်, CA, Bushman BJ ။ လူ့ကျူးကျော်။ Annu ဗြာ Psychol ။ 2002;53: 27-51 ။ [PubMed]
14 ။ et al Bruyneel SD က။ ငါအနိမ့်ခံစားခဲ့ရနှင့်ငါ့ပိုက်ဆံအိတ်အလင်းခံစားရ: depleting စိတ်ဓါတ်များစည်းမျဉ်းကြိုးစားမှုအန္တရာယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ J ကိုပြုမူနေ Decis စေကြလော့။ 2009;22: 153-170 ။
15 ။ et al Somerville LH ။ ပြောင်းလဲမှု၏တစ်ဦးကအချိန်: အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောဆက်စပ်၏
အစာစားချင်စိတ်များနှင့်ဆန္ဒရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုမှဆယ်ကျော်သက် sensitivity ကို။ ဦးနှောက် Cogn ။ 2010;72: 124-133 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
16 ။ et al Bousman, CA ။ Non-monogamous လူတို့တွင် negative စိတ်ဓါတ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ
သူကိုစိတ်ကြွဆေးများနှင့် HIV ပိုး၏အခြေအနေတွင်ယောက်ျားနှင့်အတူလိင်ရှိသည်။ J ကို disorders အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ 2009;119: 84-91 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17 ။ et al Magid V ကို။ အနုတ်လက္ခဏာ, စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားများတွင်ဆေးလိပ်သောက်ထိခိုက်စေ:
အရက်နှင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုလွတ်လပ်သောထူးခြားတဲ့အသင်းအဖွဲ့များ။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2009;34: 973-975 ။ [PubMed]
18 ။ Sinha R. စွဲ relapse အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု၏အခန်းကဏ္ဍ။ Curr စိတ်ရောဂါကုသမှုကိုယ်စားလှယ်။ 2007;9: 388-395 ။ [PubMed]
19 ။ Witkiewitz K ကို Villarroel NA ။ အနုတ်လက္ခဏာအကြား dynamic အသင်းအဖွဲ့အရက်ကုသမှုအောက်ပါချုံးထိခိုက်စေခြင်းနှင့်အရက်။ J ကို Clin Psychol နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ 2009;77: 633-644 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
20 ။ et al Heatherton TF ။ အပြုအမူအစာစားခြင်းအပေါ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်အတ္တခြိမ်းခြောက်မှုများ၏သက်ရောက်မှုများ။ J ကို Pers Soc Psychol ။ 1991;60: 138-143 ။ [PubMed]
21 ။ Macht အမ်ဘယ်လိုစိတ်ခံစားမှုအစာစားခြင်းအကျိုးသက်ရောက်စေ: ငါးလမ်းမော်ဒယ်။ အစာစားချင်စိတ်။ 2008;50: 1-11 ။ [PubMed]
22 ။ McKee S က, et al ။ စိတ်ဖိစီးမှုဆေးလိပ်သောက်ခုခံတွန်းလှန်နိုင်စွမ်းလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ပြင်းထန်မှုနှင့်ဆုလာဘ် potentiates ။ J ကို Psychopharmacol ။ 2010 Doi: 10.1177 / 0269881110376694 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
23 ။ Heatherton TF, Baumeister RF ။ Bing Self-အသိအမြင်ကနေထွက်ပေါက်အဖြစ်စားသုံးခြင်း။ Psychol Bull ။ 1991;110: 86-108 ။ [PubMed]
24 ။ et al တိန်း RZ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲထဲမှာချို့ယွင်းထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း၏ neurocircuitry ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2009;13: 372-380 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
25 ။ သိမြင်မှုဝန်အောက်မှာအစာစားခြင်း disinhibited: ငါဘူးဆိုရင်ရပ်ကွက်တစ်ခု, မန်းတီစိတ်ထဲမထားပါနဲ့။ J ကို Pers Soc Psychol ။ 2000;78: 753-763 ။ [PubMed]
26 ။ Sinha R. နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်စွဲမှအားနည်းချက်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2008;1141: 105-130 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
27 ။ Herman က CP, Mack ဃထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ထိန်းအကွပ်မရှိသောစား။ J ကို Pers ။ 1975;43: 647-660 ။ [PubMed]
28 ။ Herman က CP, စား၏ Polivy ဂျေအဆိုပါကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းဥပဒေ: သီအိုရီများနှင့်လက်တွေ့ပြဿနာများ။ ခုနှစ်တွင်: Vohs KD, Baumeister RF, အယ်ဒီတာများ။ Self-စည်းမျဉ်းများလက်စွဲစာအုပ်: သုတေသနသီအိုရီများနှင့် applications များ။2။ Guilford စာနယ်ဇင်း; 2010 ။
29 ။ et al Marlatt GA ။ Relapse ကာကွယ်တားဆီးရေး: အထောက်အထားအခြေစိုက်စခန်းနှင့်အနာဂတ်ဦးတည်။ ခုနှစ်တွင်: Miller ကလေး, အယ်ဒီတာ။ သက်သေအထောက်အထား-based စွဲကုသမှု။ 1 ။ xviii ။ Elsevier / ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 2009 ။ စ။ 465 ။
30 ။ et al Drummond DC က။ အေးစက်အရက်မှီခိုအတွက်သင်ယူမှု: cue ထိတွေ့ကုသမှုများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ br J ကိုစွဲလမ်း။ 1990;85: 725-743 ။ [PubMed]
31 ။ Glautier S က, Drummond DC က။ အရက်မှီခိုနှင့် cue reactivity ကို။ J ကိုလုံးအရက်။ 1994;55: 224-229 ။ [PubMed]
32 ။ မူးရူးစား၏ Jansen အေတစ်ဦးကသင်ယူမှုမော်ဒယ်: cue reactivity ကိုနှင့် cue ထိတွေ့မှု။ Res Ther ပြုမူနေ။ 1998;36: 257-272 ။ [PubMed]
33 ။ Stewart က J ကို, et al ။ opiates နှင့်စိတ်ကြွဆေး၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ခြွင်းချက်မရှိနှင့်အခြေအနေများကိုမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ၏အခန်းက္ပ။ Psychol ဗျာ 1984;91: 251-268 ။ [PubMed]
34 ။ DJ သမား, Tiffany ST Drobes ။ ဆေးလိပ်သောက်၏ induction စိတ်ကူးစိတ်သန်းမှတဆင့်နှင့် Vivo အတွက်တိုက်တွန်း
လုပျထုံးလုပျနညျး: ဇီဝကမ္မနှင့် Self-အစီရင်ခံစာသရုပ်။ J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သော Psychol ။ 1997;106: 15-25 ။ [PubMed]
35 ။ et al Payne တီဂျေ။ Pretreatment cue reactivity ကိုအဆုံး-of ကုသမှုဆေးလိပ်သောက်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2006;31: 702-710 ။ [PubMed]
36 ။ ဖာဂူဆန် MJ, Bargh ဂျေအေ။ ဘယ်လိုလူမှုရေးအမြင်အပြုအမူကိုအလိုအလျောက်သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2004;8: 33-39 ။ [PubMed]
37 ။ Stacy AW, Wiers RW ။ သွယ်ဝိုက်သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်စွဲ: ဝိရောဓိအပြုအမူရှင်းပြများအတွက်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ Annu ဗြာ Clin Psychol ။ 2010;6: 551-575 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
38 ။ Bargh ဂျာ Morsella အီးအဆိုပါသတိလစ်စိတ်။ Psychol သိပ္ပံရှုထောင့်။ 2008;3: 73-79 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
39 ။ et al Rook SE ။ သွယ်ဝိုက်သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု: တစ် Meta-analysis သည်။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2008;33: 1314-1328 ။ [PubMed]
40 ။ Metcalfe J ကို, ဆန္ဒပြည့်၏နှောင့်နှေး၏ Mischel ဒဗလျူတစ်ဦးကပူ / အေး-system ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: willpower ၏ဒိုင်းနမစ်။ Psychol ဗျာ 1999;106: 3-19 ။ [PubMed]
41 ။ et al Mischel W က။ အဆိုပါသက်တမ်းကျော် "Willpower": ယန္တရားများ, အကျိုးဆက်များနှင့်ဂယက်ရိုက်။ Soc Cogn neuroscience အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ 2010 Doi: 10.1093 / စကင် / nsq081 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
42 ။ Bickel wk, Marsch LA က။ နှောင့်နှေးလျှော့ဖြစ်စဉ်များ: မူးယစ်ဆေးမှီခိုနေတဲ့အမူအကျင့်, စီးပွားရေးနားလည်မှုဆီသို့။ စွဲလမ်း။ 2001;96: 73-86 ။ [PubMed]
43 ။ Vohs KD, Heatherton TF ။ self-စည်းမျဉ်းပျက်ကွက်: တစ်သယံဇာတတွေပျက်စီးမှုချဉ်းကပ်။ Psychol သိပ္ပံ။ 2000;11: 249-254 ။ [PubMed]
44 ။ Muraven M က, et al ။ self-ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အရက်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း: အ Self-ထိန်းချုပ်မှုအစွမ်းသတ္တိကိုစံပြအနေနဲ့ကနဦးလျှောက်လွှာ။ Psychol စွဲပြုမူနေ။ 2002;16: 113-120 ။ [PubMed]
45 ။ et al Vohs KD ။ self-စည်းမျဉ်းများနှင့် Self-တင်ဆက်မှု: စည်းမျဉ်းအရင်းအမြစ်တွေပျက်စီးမှုစှဲစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အားထုတ်မှု Self-တင်ဆက်မှုစည်းမျဉ်းအရင်းအမြစ်များကို depletes ချို့ယွင်း။ J ကို Pers Soc Psychol ။ 2005;88: 632-657 ။ [PubMed]
46 ။ Richeson ဂျာ Shelton ဖြစ်မှု။ စှနျးကှကျမရတဲ့အခါမဆပ်: အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအပေါ်မျိုးကွဲအဆက်အသွယ်၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychol သိပ္ပံ။ 2003;14: 287-290 ။ [PubMed]
47 ။ Baler RD, Volkow ND ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ: နှောင့်အယှက် Self-ထိန်းချုပ်မှုများ neurobiology ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Mol Med ။ 2006;12: 559-566 ။ [PubMed]
48 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ စွဲလမ်း။ Annu ဗြာ Psychol ။ 2003;54: 25-53 ။ [PubMed]
49 ။ et al Volkow ND ။ စွဲလမ်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက်အာရုံခံဆားကစ်ထပ်: စနစ်များကိုရောဂါဗေဒ၏သက်သေသာဓက။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008;363: 3191-3200 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
50 ။ et al O'Doherty JP ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာယာယီခြားနားချက်မော်ဒယ်များနှင့်ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှု။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2003;38: 329-337 ။ [PubMed]
51 ။ Garavan H ကို, et al ။ Cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာ: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် neuroanatomical သတ်မှတ်ချက်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000;157: 1789-1798 ။ [PubMed]
52 ။ S ကပေးသနား, et al ။ cue-ရူးနှမ်းကိုကင်းတဏှာစဉ်အတွင်းမှတ်ဉာဏ်ဆားကစ်၏ activation ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1996;93: 12040-12045 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
53 ။ Myrick H ကို, et al ။ အရက်-မှီခိုသောလူထဲတွင် ventral striatum ၏အရက် cue-သွေးဆောင် activation အပေါ် naltrexone နှင့် ondansetron ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008;65: 466-475 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
54 ။ Naqvi နယူးဟမ်းရှား, Bechara အေစွဲများ၏ဝှက်ထားကျွန်း: အ insula ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2009;32: 56-67 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
55 ။ Diekhof ek, Gruber O. အလိုဆန္ဒများကိုအကြောင်းပြချက်နှင့်အတူကွဲသွားရင်လိုက်တဲ့အခါ: anteroventral prefrontal cortex နဲ့နျူကလိယ accumbens အကြား Functional interaction ကထကြွလွယ်သောအလိုဆန္ဒများကိုတှနျးလှနျဖို့လူ့စွမ်းရည်ကိုအခြေခံ။ J ကို neuroscience ။ 2010;30: 1488-1493 ။ [PubMed]
56 ။ et al လူယာသည် SM ။ သီးခြားအာရုံကြောစနစ်များကိုချက်ချင်းတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ငွေကြေးဆုလာဘ်နှောင့်နှေး။ သိပ္ပံ။ 2004;306: 503-507 ။ [PubMed]
57 ။ ထင်းရှူးတစ်ဦးက, et al ။ Dopamine, အချိန်နှင့်လူသားတွေအတွက် Impulse ။ J ကို neuroscience ။ 2010;30: 8888-96 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
58 ။ et al Childress AR ။ စိတ်အားထက်သန်မှုမှရှေ့ပွေးနိမိတျ: "မမွငျရသော" မူးယစ်ဆေးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအားဖြင့် limbic activation ။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2008;3: e1506 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
59 ။ Wagner DD, et al ။ Movie, ဆေးလိပ်သောက်အကဲခတ်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်သဘောဆောင်သောလှုပ်ရှားမှုကိုယ်စားပြုမှု။ J ကို neuroscience ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.5174-10.2010 ။ (စာနယ်ဇင်းများတွင်) [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
60 ။ et al Volkow ND ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏သိမှုထိန်းချုပ်ရေးကိုကင်းချိုးဖောက်မှုများဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသများဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ Neuroimage ။ 2010;49: 2536-2543 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
61 ။ Kober H ကို, et al ။ Prefrontal-striatal လမ်းကြောင်းတဏှာ၏သိမြင်မှုစည်းမျဉ်းအခြေခံ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2010;107: 14811-14816 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
62 ။ et al Brody AL ။ စီးကရက် cue ထိတွေ့မှုကာလအတွင်းတဏှာခုခံ၏အာရုံကြောအလွှာဟာ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;62: 642-651 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
63 ။ et al Delgado MR ။ သိမြင်မှုနည်းဗျူဟာများမှတဆင့်ဆုလာဘ်၏မြော်လင့်ထိန်းညှိ။ နတ် neuroscience ။ 2008;11: 880-881 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
64 ။ et al Berkman ET ။ အမှန်တကယ်ကမ္ဘာ Self-ထိန်းချုပ်မှု၏ပတ်လည်၌ဆယ်မှာတော့: ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောတဏှာနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ကြားရှိ link ကိုခြိုးဖောကျ၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Psychol သိပ္ပံ (စာနယ်ဇင်းများတွင်) [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
65 ။ et al Heatherton TF ။ စားပေါ်မှုရောက်သောဆိုးကျိုးများ: အတ္တ-ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အရေးပါမှုကို။ J ကို Pers Soc Psychol ။ 1992;62: 801-803 ။ [PubMed]
66 ။ et al Heatherton TF ။ self-အသိအမြင်, တာဝန်ပျက်ကွက်ခြင်း, disinhibition: အာရုံစားသာသက်ရောက်ပုံကိုအာရုံစူးစိုက်မှု။ J ကို Pers ။ 1993;61: 49-61 ။ [PubMed]
67 ။ et al ဒီမိုများ Ke ။ အစားအသောက်တွေဆက်ရှိနေချိုးဖောက်မှုများနျူကလိယ Accumbens နှင့် Amygdala အတွက်ဆုကြေးတုံ့ပြန်ချက်သြဇာလွှမ်းမိုး။ J ကို Cogn neuroscience ။ 2011 Doi: 10.1162 / jocn.2010.21568 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
68 ။ သင်္ဘောသား FT, Boettiger CA. စွဲလမ်းများအတွက် Impulse, တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးများနှင့်စွန့်စားမှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2009;93: 237-247 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
69 ။ Sellitto M က, Ciaramelli အီးလူသားများအတွက် medial orbitofrontal ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပြီးနောက်အနာဂတ်ဆုလာဘ်များက de Pellegrino G. အ Myopic လျှော့စျေး။ J ကို neuroscience ။ 2010;30: 6429-36 ။ [PubMed]
70 ။ Figner B, Knoch: D, ဂျွန်ဆင် EJ, Krosch AR, Lisanby SH, Fehr အီး, Weber နဲ့အီးယူ။ intertemporal ရွေးချယ်မှုအတွက် lateral prefrontal cortex နဲ့ Self-ထိန်းချုပ်မှု။ နတ် neuroscience ။ 2010;13: 538-39 ။ [PubMed]
71 ။ Sinha R ကို, et al ။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာနဲ့ဆက်စပ်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Psychopharmacology ။ 2005;183: 171-180 ။ [PubMed]
72 ။ Davidson RJ, et al ။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၏အာရုံကြောဆိုင်ရာအချက်အခြာကျခြင်း - အကြမ်းဖက်မှုအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်နိဒါန်း။ သိပ္ပံ။ 2000;289: 591-594 ။ [PubMed]
73 ။ Ochsner KN, စုစုပေါင်း JJ ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2005;9: 242-249 ။ [PubMed]
74 ။ et al Hariri AR ။ ကြောက်မက်ဘွယ်သောလှုံ့ဆော်မှုဖို့ amygdala တုံ့ပြန်မှု Neocortical မော်ဂျူ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;53: 494-501 ။ [PubMed]
75 ။ et al ဂျွန်စ T က။ အဓိကစိတ်ကျရောဂါအတွက်ထိပ်တန်း-Down prefrontal-subcortical circuitry ၏ counterproductive စုဆောင်းမှု: ထိန်းညှိရန်ပျက်ကွက်ခြင်း။ J ကို neuroscience ။ 2007;27: 8877-8884 ။ [PubMed]
76 ။ et al Ochsner KN ။ ခံစားချက်တွေကို Rethinking: စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏သိမြင်မှုစည်းမျဉ်းတစ်ခု FMRI လေ့လာမှု။ J ကို Cogn neuroscience ။ 2002;14: 1215-1229 ။ [PubMed]
77 ။ et al Ochsner KN ။ အာရုံကြောစနစ်များသိမြင် down- ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဖွင့်-စည်းမျဉ်းအနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏: ပိုကောင်းသို့မဟုတ်ပိုဆိုးဘို့ဘို့။ Neuroimage ။ 2004;23: 483-499 ။ [PubMed]
78 ။ et al Urry HL ။ Amygdala နှင့် prefrontal cortex ventromedial ပြောင်းပြန်အနုတ်လက္ခဏာ၏စည်းမျဉ်းစဉ်အတွင်း coupled နေသော diurnal ထိခိုက်စေခြင်းနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်း
အသက်ကြီးလူကြီးများအကြားတွင် cortisol Secret ၏ပုံစံ။ J ကို neuroscience ။ 2006;26: 4415-4425 ။ [PubMed]
79 ။ အာမခံ TD, et al ။ အောင်မြင်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းဖြန်ဖြေ Prefrontal-subcortical လမ်းကြောင်း။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008;59: 1037-1050 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
80 ။ et al Schardt DM ။ ပြုမူမှုမျိုးဗီဇကမကထပြုခဲ့ amygdala hyperreactivity မှေးမှိန်။ Neuroimage ။ 2010;53: 943-951 ။ [PubMed]
81 ။ et al Donegan နယူးဟမ်းရှား။ နယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါအတွက် Amygdala hyperreactivity: စိတ်ခံစားမှု dysregulation များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;54: 1284-1293 ။ [PubMed]
82 ။ Silbersweig: D, et al ။ နယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါအတွက်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှုများ၏အခြေအနေတွင် frontolimbic inhibitory function ကို၏ပျက်ကွက်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;164: 1832-1841 ။ [PubMed]
83 ။ et al နယူး AS ။ နယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါအတွက် Amygdala-prefrontal အဆက်ဖြုတ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2007;32: 1629-1640 ။ [PubMed]
84 ။ ကင်မ် MJ, Whalen PJ ။ တစ်ဦး amygdala-prefrontal လမ်းကြောင်းများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသမာဓိရှိရိုစိုးရိမ်စိတ်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2009;29: 11614-11618 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
85 ။ Yoo အက်စ်အက်စ်, et al ။ အိပ်စက်ခြင်းမရှိသောလူ့စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ဦး နှောက် - prefrontal amygdala ပြတ်တောက်သည်။ Curr Biol ။ 2007;17: R877-878 ။ [PubMed]
86 ။ Devine PG ။ Stereotypes နှင့် Prejudice - သူတို့၏အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများ။ J ကို Pers Soc Psychol ။ 1989;56: 5-18 ။
87 ။ Fiske ST ။ ကျပုံစံ, စိတ်စွန်းကွက်များနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု။ လူမှုရေးစိတ်ပညာ၏လက်စွဲစာအုပ်။ 1998;2: 357-411 ။
88 ။ et al Cunningham WA ။ အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်မျက်နှာများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်သီးခြားအာရုံကြောအစိတ်အပိုင်းများကို။ psyche သိပ္ပံ။ 2004;15: 806-813 ။ [PubMed]
89 ။ et al Lieberman MD ။ အမေရိကန်-အာဖရိကနှင့်ကော့ကေးဆပ်-အမေရိကန်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပြိုင်ပွဲ-related amygdala လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု fMRI စုံစမ်းစစ်ဆေး။ နတ် neuroscience ။ 2005;8: 720-722 ။ [PubMed]
90 ။ et al Richeson ဂျာ။ အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအပေါ်မျိုးကွဲအဆက်အသွယ်များ၏သက်ရောက်မှုတစ်ခု fMRI စုံစမ်းစစ်ဆေး။ နတ် neuroscience ။ 2003;6: 1323-1328 ။ [PubMed]
91 ။ ဘဏ်များ SJ, et al ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းစဉ်အတွင်း Amygdala-တိုကျရိုကျဆက်သွယ်မှု။ Soc Cogn neuroscience အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ 2007;2: 303-312 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
92 ။ et al Batterink L ကို။ ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများအကြားအစားအစာတုံ့ပြန် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့ပြောင်းပြန်ဆက်နွယ်နေပါသည်: တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ Neuroimage ။ 2010;52: 1696-1703 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
93 ။ Li က CS, Sinha R. Inhibitory ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုစည်းမျဉ်း: စိတ်ပညာလှုံ့ဆော်အတွက်တိုကျရိုကျ-limbic ကမောက်ကမဖြစ်မှုတို့အတွက်သက်သေအထောက်အထား neuroimaging
စွဲလမ်း။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2008;32: 581-597 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
94 ။ Macdonald KB ။ အားထုတ်မှုထိန်းချုပ်မှု, ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအပြောင်းအလဲနဲ့, လူ့များ၏စည်းမျဉ်းဓာတ်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ Psychol ဗျာ 2008;115: 1012-1031 ။ [PubMed]
95 ။ Bechara အေဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတှနျးလှနျ willpower ဆုံးရှုံး: တစ် neurocognitive ရှုထောင့်။ နတ် neuroscience ။ 2005;8: 1458-1463 ။ [PubMed]
96 ။ Koob gf, Le Moal အမ်စွဲခြင်းနှင့်ဦးနှောက် antireward စနစ်။ Annu ဗြာ Psychol ။ 2008;59: 29-53 ။ [PubMed]
97 ။ Heuttel လုပ် SA ။ ဆုံးဖြတ်ချက်မှ neuroscience များအတွက်ဆယ်ပါးစိန်ခေါ်မှုများ။ တပ်ဦး neuroscience ။ 2010;4: 1-7။
98 ။ et al Volkow ND ။ အရက်၏အလယ်အလတ်ဆေးများလူ့ဦးနှောက်၏အလုပ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုနှောင့်အယှက်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2008;162: 205-213 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
99 ။ Cohen ကို JR, Lieberman MD ။ အကွိမျမြားစှာဒိုမိနျးတှငျကွိုးစားအားထုကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်ရေးများ၏အဖြစ်များသည့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအခြေခံ။ လူ့အဖွဲ့အစည်း, စိတ်နှင့်ဦးနှောက်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်ရေး။ 2010: 141-162 ။
100 ။ Muraven M က, et al ။ အလေ့အကျင့်ကတဆင့် Self-စည်းမျဉ်း၏ longitudinal တိုးတက်မှု: ထပ်ခါတလဲလဲလေ့ကျင့်ခန်းမှတဆင့် Self-ထိန်းချုပ်မှုအစှမျးသတ်တိကိုတည်ဆောက်ခြင်း။ J ကို Soc Psychol ။ 1999;139: 446-457 ။ [PubMed]
101 ။ Gailliot MT, et al ။ Self-စည်းမျဉ်းအစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်ကျပုံစံနှိပ်ကွပ်၏ depleting အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ Pers Soc Psychol Bull ။ 2007;33: 281-294 ။ [PubMed]
102 ။ Self-ထိန်းချုပ်မှုလေ့ကျင့် Muraven အမ်ဆေးလိပ်သောက်ချုံး၏အန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ။ Psychol စွဲပြုမူနေ။ 2010;24: 446-452 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
103 ။ Bermude နှင့် P ကို, et al ။ cortical အထူနှင့် voxel-based morphometry အားဖြင့်ထင်ရှားအဖြစ် musicianship ၏ Neuroanatomical Correlate ။ Cereb Cortex ။ 2009;19: 1583-1596 ။ [PubMed]
104 ။ Gailliot MT, Baumeister RF ။ willpower ၏ဇီဝကမ္မဗေဒ: Self-ထိန်းချုပ်မှုသွေးဂလူးကို့စဆက်သွယ်ထားသော။ Pers Soc Psychol ဗျာ 2007;11: 303-327 ။ [PubMed]
105 ။ Gailliot MT, et al ။ self-ထိန်းချုပ်မှုကန့်သတ်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အဖြစ်ဂလူးကို့စအပေါ်မှီခို: willpower တစ်ဦးဥပစာထက်ပိုပါတယ်။ J ကို Pers Soc Psychol ။ 2007;92: 325-336 ။ [PubMed]
106 ။ Gailliot MT, et al ။ ကျပုံစံနှင့်သွေးထဲတွင်စိတ်စွန်းကွက်: Sucrose အချိုရည်လိုမုန်းထားနှင့်ကျပုံစံလျှော့ချပေးပါတယ်။ J ကို Exp Soc Psychol ။ 2009;45: 288-290 ။
107 ။ Benton: D, et al ။ အသွေးသည်ဂလူးကို့စငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်မှတ်ဉာဏ်နှင့်အာရုံကိုသြဇာလွှမ်းမိုး။ Neuropsychologia ။ 1994;32: 595-607 ။ [PubMed]
108 ။ et al Jonides J ကို။ နှုတ်ဖြင့်အလုပ်အဖွဲ့မှတ်ဉာဏ် Load ပေအားဖြင့်တိုင်းတာဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက် Activation အကျိုးသက်ရောက်သည်။ J ကို Cogn neuroscience ။ 1997;9: 462-475 ။